Okuhlukahlukene - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Okuhlukahlukene"
NgoLwesibili, 10 Juni 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Umfakisicelo ophethe ngokuzenzakalelayo wamabhodlela epulasitiki, anesibambo esingacacile. Yehlisa umsebenzi wezandla okuholela ekubuyiseni okufushane kutyalo-mali. Ijubane: kufika ku-6500 BPH noma i-12000 BPH (okungenzeka ukuthi ungathola amawele okudlidliza: 2 x 6500 BPH).
Ishicilelwe ku Various
Umakwe ngaphansi: ukuphatha umenzi wesicelo, phatha, amabhodlela, isibambo seplastiki, ibhodlela lepulasitiki, phatha unscrambler, isibambo sangaphandle, DHP200, Isikhiphi se-hopper, isitsha sokudlidliza, inqubo yezinqubo ezimbili, ukushaya isikhunta, umjovo
NgoLwesine, 23 Ephreli 2020 by UCristina Maria Sunea
I-othomathikhi Ngokuzenzakalelayo, inhloko eyodwa yokufaka umenzi wamabhodlela epulasitiki. Ngenxa yenguqulo yayo yokubamba ehlelekile yesibambi, ugwema izinkundla zokudla njll. Ijubane: azungeze ama-800 - 1200 BPH.
Umakwe ngaphansi: phatha, izibambo, amabhodlela, i-stackable, isibambo seplastiki, ibhodlela lepulasitiki, shrinkage, DHP301, inhloko eyodwa, ukubhodla kwebhodlela, umklamo ongagxiliwe, jam, umugqa wokumisa, izibambo eziqinekayo, isibambi-isicelo, inqubo yezinqubo ezimbili, ukushaya isikhunta, umjovo, umjovo wokubumba
ULwesine, 26 kuFebhuwari 2015 by Ubunjiniyela beDelta
Le yunithi ikuvumela ukuthi wenze imigqa yamabhodlela e-conical akhiwe, angenalutho, epulasitiki emisebeni engezansi yokufakwa kwamabhodlela. Ibhodlela ngalinye limiswa ngokuzimela ngesithinteli se-micro elizinikezele. Iyunithi kungenzeka ukuthi ibekwe kweminye imishini.
Umakwe ngaphansi: amabhodlela e-conical, imigqa, umugqa, ukufakwa kwamabhodlela, iyunithi yokwakha, ukwakha imigqa, ukwenza imigqa, ibhande, I-DRF100, i-conicity, isilawuli se-micro
NgoMsombuluko, 26 Juni 2017 by Ubunjiniyela beDelta
Isicelo sokufaka uthuli
Le yunithi ibeka uthuli ezintanjeni zezitsha / zamabhodlela. Ivikela iziqukathi ekugomeni njengothuli, izinambuzane, njll. Ngokuzenzakalelayo. Ama-cartridge angu-6, angaqukatha ama-cap angama-50-100 lilinye.
Umakwe ngaphansi: umenzi wesicelo we-cap cap, uthuli cap, ukungcola, cap, intamo, intamo yesitsha, isigubhu, ibhodlela, isitsha, Uthuli, I-ETK300